Ukuphonononga iYI 4K + Ikhamera yesenzo | I-Androidsis
Kwakhona kwi-Androidsis sinethamsanqa lokuba sikwazi ukuzama isixhobo esivela kwi-YI Technology. Ngeli xesha sinecebo elinxulumene nokufota, i Ikhamera ye-YI 4K + yesenzo. Ikhamera yesenzo enika iziphumo ezonelisayo kakhulu.
Ukuba ujonge ikhamera ekwazi ukukukhapha xa usenza imidlalo yezemidlalo okanye imidlalo yezamanzi, ungajongi phambili, i-YI 4K + inokuba ngumlingani wakho omkhulu. Ikhamera inkcitho esemgangathweni kuwo omane amacala kwaye oko kubonelela ngezibonelelo ezinakho ukugqitha nawuphi na umntu okhuphisana naye. Sijongene nemveliso esemgangathweni ngexabiso lokhuphiswano kwaye ngoku ungathenga ngexabiso elihle kwiAmazon
1 YI 4K + Ikhamera yesenzo ubuyikhangela
2 Ukubonakala kwepremiyamu kunye nokusebenza ngexabiso elifanelekileyo
3 YI 4K + Idatha
4 Imixholo yebhokisi
5 Ujongano lomsebenzisi olugqwesileyo kunye neApp ezinikeleyo
6 Eyona khamera ilungileyo emhlabeni?
7 Yintoni esiyithandayo kakhulu kwaye yintoni esiyithandayo encinci
7.1 Sithande kakhulu
7.3 Khange siyithande kangako
YI 4K + Ikhamera yesenzo ubuyikhangela
Umhlaba wokufota ubanzi kangangokuba kunzima ukudibanisa iintlobo ezahlukeneyo zabalandeli okanye zabasebenzisi ngendlela emanyeneyo. Ukusukela oko kwafika ii-smartphones, phantse wonke ummi uphethe ikhamera. Kwaye bonke bangaphakathi kweetalente zabo okanye ukusikelwa umda kwabo banokuba ngabafoti.
Kodwa le meko ayizigubungeli iimfuno icandelo elithile. Kukho abo bafuna ezinye iintlobo zeekhamera. Kwaye nangona ii-smartphones ezirhabaxa Kude kudala, abakabikho ngokuhambelana nento enokwenziwa yiKhamera yokuSebenza. Ingakumbi kubungakanani, ubunzima kunye nokuqina.
Ifemi ye-YI inekhathalogu yayo kwiimodeli ezininzi zeAction Cams, kodwa i4K + yeyona inikezela ezona mpawu zibalaseleyo. Yenzelwe ukuhlangabezana nezona mfuno zinzima kwaye usebenze kakuhle kwezona ndawo zinzima. Esona sisombululo siphezulu kunye nomgangatho ophezulu, yile YI 4K +.
Ukubonakala kwepremiyamu kunye nokusebenza ngexabiso elifanelekileyo
Zininzi "iikhamera zentshukumo" kwintengiso. Iimpawu ezingenakubalwa zibonelela ngeekhamera zamanyathelo ezikwazi ukurekhoda iividiyo kwiimeko ezinzima, nangaphantsi kwamanzi. Kodwa xa sikhangela ikhamera "yokwenene" kude neenketho ezisisiseko kunye nexabiso eliphantsi esinokufumana ukuba zimbalwa ezibalaseleyo.
Umahluko kukuba iYI 4K + kwaye okhuphisana naye omkhulu kukuba unikezela ukusebenza okuphezulu kangaka iya ku ixabiso liphantsi kakhulu ngaphezu kwezinye iindleko. Kwaye kulapho le khamera, ukongeza ekumeleni ngaphandle kwayo yonke into enokuyenza, yenza umahluko. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho olugqwesileyo ukuba ujonge ikhamera esemgangathweni ngexabiso elifanelekileyo.
Ngokwasemzimbeni i-YI 4K ifana kakhulu naphambi kwayo. Kunye umphambili ogqibeleleyo olingisa ifayibha yekhabhoni imbonakalo inomtsalane kakhulu. Kufuneka sazi ukuba ubukhulu bayo buyafana ngokufanayo zonke izixhobo ezivela kwiinguqulelo zangaphambili ziyahambelana. Amanyathelo ayo X x 65 42 30 mm, Ubungakanani obugqibeleleyo?
Ngaphambili siyifumana, ukongeza kwifayile ye- oonobumba bomzekelo "4k +" Isibane se-LED esisinceda sazi ukuba sikhanyisiwe okanye siyarekhoda.
Ukuba sijonga yakhe Icala ElilungileEmva kwesiciko esincinci, kukho Indawo encinci ye-SD, nakwifayile ye- icale lasekhohlo i umboko. Kwi ngasemva inga i-yakho Isikrini se-2,2, Into eyahlula ngokukodwa kwezo zikhetho zitshiphu sinokubona kwimarike. Ngesikrini sinokunxibelelana ngqo nekhamera ukukhetha naluphi na ukhetho oluninzi.
Kulo ezantsi siyifumene i-adaptha yesikulufu ukuze isetyenziswe kunye nonxantathu. Nangona ingazinzanga, ibekwe ecaleni, asizukuba neengxaki zokuzinza ngenxa yobunzima bayo.
Kwaye kweyakhe phezulu, singene iqhosha lamandla, ekwasetyenziselwa ukuthatha iifoto, okanye xa sinekhamera kwimowudi yevidiyo, ukuqala okanye ukuyeka ukurekhoda.
YI 4K + Idatha
Umzekelo 4k +
woluvo Sony IMX377
Isigqibo 12 Mpx
Lens 155º ngokuvula 2.8
Uzinzo I-elektroniki ukuya kwisisombululo se-4k kwi-30 fps
Inkqubo Ambarella H2
Isikrini 2.2 intshi touch
Ividiyo ukurekhoda kwi-4k kwi-60 fps
Ibhetri 1400 mah
Windows RT Ulawulo lwelizwi-izindlu ezingangeni manzi-uqhagamshelo lwe-wifi
Ixabiso 322 €
Unxibelelwano lokuthenga ekunikezelweni Ikhamera ye-YI 4K + yesenzo
Lixesha lokuba unbox kwaye ubone ukuba singafumana ntoni ngaphakathi kwebhokisi yale YI 4K + inomdla. Kwaye kwifayile ye- ukupakishwa ngononophelo njengoko kuqhelekile kwinkampani Kwizinto ezimhlophe neziphathwayo ngaphakathi sifumana isimanga. Ukongeza kwikhamera ekhuselweyo ngokugqibeleleyo esinayo isibini seentambo. Inye yokutshaja kunye nokudluliswa kwedatha, sonwabile kakhulu ukubona ukuba iqhubela phambili ngokunikezela ngefomathi kwi Uhlobo C lwe-USB. Y enye yintoni enokusinceda ukuqhagamshela imakrofoni eyongezelelweyo xa urekhoda iividiyo.
Ubutsha kunye nento eyothusayo kukufumanisa ukuba le khamera, ubuncinci kwifomathi esiyifumeneyo, ibandakanya iqokobhe "elingangeni manzi". Ke kwasekuqaleni singayisebenzisa nakweyiphi na indawo, kubandakanya emanziningaphandle koloyiko. Kwaye ngaphandle kokuthenga izinto ezingaphezulu kwayo.
Indlu, njengoko kulindelwe, ihlengahlengiswe ngokugqibeleleyo kwikhamera ebonelela nge ukhuseleko IP68 esinokuthi sizole ngayo echibini okanye elwandle. Ndiyabulela kuye singayigalela emanzini ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-40 ubunzulu… Eyokugqibela!
Ujongano lomsebenzisi olugqwesileyo kunye neApp ezinikeleyo
Sele siyiqhelile loo nto Itekhnoloji ye-YI ilinganisa izixhobo zekhompyutha Kuzo zonke izixhobo zakho. Kwaye kunjalo, kwakhona ukusuka isoftware eyenziweyo ukuze amava omsebenzisi anelise kangangoko. Ngaphandle kokumangalisa, i-YI 4K + ayikho ngaphandle.
El imenyu yekhamera yenzelwe kakuhle ukuze ukwazi ukufikelela kuyo nayiphi na ifoto okanye indlela yevidiyo ngokungekho mthethweni. Singafikelela Useto lwe-ISO, ibhalansi emhlophe, khetha isiqinisi se-elektroniki, umgangatho esifuna ukurekhoda ngawo, okanye uthathe iifoto kwifomathi yeRAW. Ukukhankanywa okukodwa kufanelekile ukuzinza ngombane okwaziyo ukunika iziphumo ezilungileyo.
Njengazo zonke izixhobo ze-YI zemida, sinazo kwivenkile yesicelo sikaGoogle iApp yenziwa kakuhle. Kule meko, ukuba yikhamera yesenzo ebonelela ngoxhumano lwe-Wi-Fi, iyavakala ngakumbi. Kwaye kuluvuyo fikelela kwimenyu yekhamera kunye nazo zonke iisetingi kwi-smartphone yethu. Siza kukwazi qala okanye uyeke ukurekhoda, thabatha imifanekiso, kwaye eyona ilungileyo, jonga kwiscreen ngexesha lokwenyani into oyirekhodayo ikhamera.
Intshukumo ye-YI-Ikhamera yeYI
Umthuthukisi: YI Technologies, Inc.
Ukugqiba ukujonga okuhle, amanqaku e-YI 4K ulawulo lwezwi esiluthandileyo, ukulungiselela ukusetyenziswa kwayo kunye noqwalaselo. Kwaye ngenxa yokuba iluncedo kangakanani ukusebenzisa ikhamera ngaphandle kokuchukumisa ikhamera okanye iselfowuni. I-icing kwicandelo "lokusebenziseka" elenza libengcono.
Eyona khamera ilungileyo emhlabeni?
Le yindlela abenzi bayo abayichaza ngayo… ngaphandle kwamalaphu ashushu. Kwaye bayayenza ngokhuseleko lokuba babe nakho ukuthelekisa ezona ntshaba zabo zikufutshane. I-YI 4K + yiyo Iyakwazi ukurekhoda iividiyo ukuya kuthi ga kwizakhelo ezingama-60 ngomzuzwana. Into eseleyo ifumaneka kuphela kwabangcono kunye neekhamera eziphambili kakhulu kwintengiso.
Apha ungathenga i-YI 4K + ngetyala elingangenwa ngamanzi elibandakanyiwe kuphela i-322 €, Ngesaphulelo esikhethekileyo phantse € 90 xa kuthelekiswa nexabiso layo lokuqala.
Los iividiyo ezingaphantsi kwamanzi Zizo ezitsala umdla. Sikwazile ukwenza uvavanyo, kwaye iziphumo zilungile ngokwenene. Siyithandile Ukucaca kwemibala Inkcazo ebonelelweyo nkqu nekhamera efakwe emanzini.
Le yindlela ye-YI 4K + yeKhamera yokuSebenza esivavanya iirekhodi zevidiyo ... eyoyikekayo!
Iposi elibiwe I-Androidsis (@Androidsisweb) kwi Sep 23, 2018 kwi-12: 59pm PDT
Iifoto nazo zithathiwe bonisa umgangatho kunye nesisombululo esihle kakhulun, ukongeza ekuqwalaselweni, ngokulungileyo, i-angle ebanzi eyenza iifoto zithathe indawo eninzi ngakumbi kunezo zithathwe ngekhamera eqhelekileyo.
Ngokubanzi, kwaye emva kweentsuku zokuvavanya ukuthatha iifoto kunye neevidiyo, Singatsho ukuba i-YI 4K + yenye yezona zinto zisemgangathweni / amaxabiso onokukhetha kuwo kwintengiso kweli candelo namhlanje. Kwaye njengazo zonke iimveliso zalo menzi sikwazile ukuvavanya, ibonelela ngomgangatho kwizixhobo kwaye igqityiwe ezenza ukuba ivelele kwezinye.
Yintoni esiyithandayo kakhulu kwaye yintoni esiyithandayo encinci
La umgangatho wokurekhoda ividiyo ukuba inikezela ngokwenene yenye yezona zinto zibalulekileyo. Bhala Iividiyo ezingama-4K kwii-60 fps isafikelela kwabambalwa.
Sithande nokuba uyayihlonipha amanyathelo alinganayo ngokubhekisele kwinto eyandulelayo, ke ngoko zonke izixhobo ziyahambelana.
El lawulo lwezwi Inika ukudityaniswa kolawulo kwaye iyenza ibe bhetyebhetye kwaye isebenzise ngokulula, enye indawo eyahlukileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa kuthelekiswa neentshaba zayo.
La ujongano lwekhamera kunye nokulula kokusebenza yekhamera enolawulo olulula, olunomdla kunye noluthe ngqo.
La isicelo sokusetyenziswa ngeselula Iphumelele kakhulu kwaye sinokufikelela kuzo zonke iindlela, nkqu nakwifilimu, ngaphandle kokuchukumisa umbulelo wekhamera kunxibelelwano lwe-Wi-Fi oluzinzileyo.
Imilinganiselo efanayo nenguqulo yangaphambili
Uhlelo lokusebenza lokusetyenziswa kunye ne-smartphone
Khange siyithande kangako
Obunye bobuthathaka be-YI 4K + yile ibhetri yakhe. Babo 1400 mah Azinakwanela usuku olude lweevidiyo kunye neefoto elunxwemeni.
Ixabiso lakho, nokuba kungaphantsi kweGoPro edumileyo, kunokuba phezulu, ngakumbi ngexabiso lemodeli edlulileyo.
La isikrinikhohlo into emfutshane ye-brillKwilanga elipheleleyo kunzima ukubona useto okanye izinto ezenziweyo.
Ixabiso liphezulu kakhulu kunenguqulo yangaphambili
Ukukhanya kwesikrini esisezantsi
Ikhamera ye-YI 4K + yesenzo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Ukuphonononga ikhamera ye-YI 4K + yesenzo